Maxay maalqabeennada Yuhuudda lacag badan ugu bixinayaan Ilhaan Cumar? - Jigjiga Online
HomeSomalidaMaxay maalqabeennada Yuhuudda lacag badan ugu bixinayaan Ilhaan Cumar?
Maxay maalqabeennada Yuhuudda lacag badan ugu bixinayaan Ilhaan Cumar?
Washington (JO) – Kooxaha garabka midige u janjeera ee gacansaarka la leh Israa’iil ayaa waxa ay bartilmaameedsanayaan xildhibaan Ilhaan Cumar, oo ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga kana soo gasha gobolka Minnesota, sida uu daabacay wargeyska Huffpost.
Ilhaan Cumar ayaa meelaha fagaaraha waxa ay kaga dhaleecaysaa dowladda Israa’iil, waxa ayna ka mid tahay xubnaha magaca leh ee horumarka sameynaya ee Koongareeska.
Antone Melton-Meaux, oo 47-jir ah, waa xeer ilaaliyaha magaalada Minneapolis, waxa uu doonayaa inuu booska ka riixdo Ilhaan Cumar, oo waxa ay isreebreebka doorashada Xisbiga Dimuqraadiga ee xilka koongareeska ku tartami doonaan Ilhaan. Ninkan ayaa bishii May oo kaliya waxa loo uruuriyay in ka badan $1.5 oo doolar.
Inta badan lacagtaasi waxa ay ka imanaysaa guddiyada siyaasadeed ee ka soo horjeeda in cadaadis dheeraad ah uu Mareykanka uga yimaado dowladda Israa’iil. Laba kooxood oo noocaas oo kale ah, sida kooxaha gacansaarka la leh Israa’iil iyo Mareykanka iyo NORPAC, ayaa waxa ay ilaa waqtigan la joogo Melton-Meaux siiyeen $450,000.
Sida uu daabacay wargeyska The Times of Israel, Xildhibaan Ilhaan Cumar, ayaa saameynta Sucuudi Carabiya ee maamulka Trump waxa ay ku xiriirisay Israa’iil, iyadoo sheegtay buu wargeysku leeyahay in labada dal ay dhaqaale ku bixinayaan sidii ay u gaari lahaayeen waxa ay iyagu doonayaan.
Wareysi ay siisay wargeyska Sunday Times ee UK ka soo baxa ka hor inta aanan la daabicin buugeeda “Taasi waa sida ay Ameerika u eg tahay: Safarkeygii qaxootiga ilaa xildhibaannimada Kongareeska” ayaa waxa ay u badan tahay inuu sii kicin doono xiisadda u dhaxaysa Ilhaan Cumar iyo taageerayaasha Israa’iil.
Tartanka Ilhaan Cumar ay ugu jirto sidii dib loogu soo dooran lahaa ayaa waxaa walwal badan uu ku hayaa kooxaha gacansaarka la leh Israa’iil iyo maalgeliyayaashaba kuwaas oo fursad cusub u arka tartankan, kaas oo ay doonayaan inay ku soo bandhigaan awooddooda kaddib markii dhabarka loo saariyay guuldarro layaab leh.
Sanadkii hore ayaa xukuumada Israa’iil waxay ku dhawaaqday inay joojisey Socdaalkii Xildhibaan Ilhaan Cumar iyo Rashida Taib Ay ku tegi lahaayeen Falastiin iyo Israa’iil.
Waxa tani ay ka dambeysya kadib la tashiyo uu sameeyey Ra’iisal Wasaaraha Israa’iil Ben Yamin Netanyahu kaas oo amray in la joojiyo Socdaalkaasi.
Hore Madaxweynaha Mareykanka ayaa udalbaday is hortaag lagu sameeyo Ilhaan Cumar socdaalkeeda sidaa awgeedna waxay warbaahinta qaar sheegayaan in codsigaasi la tixgeliyey.
Qoraal uu Trump soo dhigay Twitter-kiisa ayuu ku sheegay in Labada Gabdhood ay yihiin kuwo wax ka sheega oo Neceb Dadka Israa’iil.
Rashida Taib ayaa asal ahaan kasoo jeeda Dalka Falastiin waxaana Golaha Congress-ka Mareykanka ay kasoo gashay Gobolka Michigan,halka Ilhan Cumar oo Soomaaliya ka tagtay ay Minesotta Kasoo gashay.
Aamina ma noqon doontaa haweenaydii u horraysay ee hogaanka u qabata Ururka Ganacsiga Adduunka?